Maamulaha shirkadda Apple Tim Cook ayaa soo saaray $ 198 million in 2016, ma runbaa? ITS
Saraakiisha sar sare ee Apple ayaa arkay mushaharkooda sanadkan kahor inta uu madaxwayne Kuxigga Tim Cook uu mushaharkiisii ​​ugu weynaa weli ka helay sharafta 2011.
Kobenhagen: Shaqaalihii ugu horreeyay ee kobaca Cook waxa ay ku iibsadeen $ US22.8 million ($ 31 million) mid kasta oo loogu talagalay 2016, sida lagu sheegay farriin dhexdhexaadin ah oo lagu qoray jimcaha. Xirmooyinka lacag bixinta waxaa ka mid ahaa $ US2.8 million oo ah lacag bixinta iyo abaalmarin lacageed, iyo $ US20 million oo ah deeq-lacageed.
Warren Buffett's Berkshire Hathaway ayaa cadeeyay in wax ka badan hal bilyan oo doolar oo Apple ah.
Cook waa $ US8.75 Million ($ 12 million) oo aan wax lacag ah ku helin 2016 maaliyadeed, oo ay ku jiraan $ US3 million compensation iyo abaalmarin US5.37 malaayiin lacag ah, ma mataleyso saamiyada 1.26 million oo laga soo qaatay sharaf weyn oo uu ku helay ka dib markii uu ku noqday CEO .
Waxay ku qiyaaseen $ US MONXUMX million ($ 136 million) marka ay bixiyaan - ugu weyn ee gaadiidka Cook ayaa sanad keli ah ka helay sharafta. Qiyaasta saamiyada ayaa laga reebay miisaanka mushaharka ee dakhliga dhexdhexaadinta macaamiilka maaddaama ay kaliya diiwaangeliso qiimaha cusub.
Faa'idadu waa xawaalad aad u wayn oo ka timid 2015 markii uu madaxweyne helay $ US10 million oo magdhow ah iyo abaalmarin, iyo $ US64.2 oo ku jirta miisaaniyad ka timid deeqda horumarinta 2011. Qaybta inteeda badan ee saamiyada 2016 maaliyaddu ma aysan dhicin inay fuliyaan oo ay weheliyaan khadadkaas aan halis u ahayn inay ka baxaan xitaa sida ay xustay in heshiisyadii ugu horreeyay ee sanadlaha ah ay hoos u dhacaan tan iyo 2001.
Noocyada ugu dambeeya ee iPhone, korontada dakhliga ee ugu weyn ee Apple, ma aysan soo tarjunin barnaamijka sifeynaya habka ka hor sameynta. Kooxaha Shiineyska ah ee Shiinaha ayaa soo saaraya qalab aan qaali aheyn iyada oo ay abuurtay qurba-joogta inay ku guuleystaan ​​bartilmaameedka
Guddidu waxay ku qanacsan yihiin Kombuyuutarrada 1 Macaamiishu ku xidhnayd laba qaybood oo ka badan sanadaha 10 markii uu ku maareynay maamulka ururka California ee 2011.
2013, gudida mushaharaadka waxay ku xidhnayd 33% saamiyada saamiga shirkadda ee shirkadda S & P 500 ee Kuqsigu u gaar ah, waxayna qorshaysay saamiyada si loo bixiyo sanad kasta. Sanad ka dib, ururku wuxuu xayiray 7-for-1.
Agaasimaha shirkadda Apple Tim Cook ayaa ku dhowaad $ 200 million sanad ka hor, inkastoo xaqiiqda ah in soo saaraha iPhone uu soo bandhigay heshiiskii ugu horeeyay ee sanadlaha ah ...
Maamulaha shirkadda Apple Tim Cook ayaa ku dhowaad $ 200 million sanad ka hor, inkastoo xaqiiqda ah in iPhone creator ay soo sheegtey heshiiskii ugu horreeyay ee sannadlaha ah tan iyo 2001. Sawir: David Paul Morris
Cook waxay heshay mid kasta oo ka mid ah 280,000 fulinta saamiyada ku xiran 2016 tan iyo markii Apple soo laabashada stock saddexdii sano ee la dhameeyay August 24 ayaa ku jiray saddexaad ee ugu sareeya ururada liiska. Waxa kale oo uu helay 980,000 saamileysatey isaga oo ku sii jira shaqada.
Isku xirka lacagaha la soo dhaafay, Cook ayaa soo ururiyay saamiyo ka badan $ US350 million ($ 479 million) tan iyo markii uu noqday inuu noqdo CEO.
Waxa uu intaa ku daray wadada si ay u hesho kala badh saamiyada saamiyada ku xiran dib u soo celinta dakhliga, waxaana la siiyay lacag bixinta bisha Agoosto 2017 iyo 2018 illaa saddexda sano ee soo celinta saamileyda, sida macluumaadka ay soo ururisay Bloomberg.
Hantidhawrka 2016 ee soo saarka iPhone -ka oo ay ka mid tahay faa'iidada dakhliga ee 12 ee deyn kasta, ayaa ka qaxaya qaybaha S & P 500.
Deeqaha qiimaha sare ee shirkadaha sare ee Angela Ahrendts, Eddy Cue, Luca Maestri, Dan Riccio iyo Bruce Sewell ayaa intaa dheer oo aan si buuxda ugu xirneyn inay soo celiyaan saamiyada shirkadda Apple ee ka badan saddex sano. Inta ka hartay cisbitaalka gudaha afar sano iyo bar ka dib marka la oggol yahay. Lacagta abaalmarinta ayaa lagu bixiyay hoos-u-dhigga diiradda iyadoo hay'addu ay ka maqan tahay heshiisyada netka iyo ujeedooyinka mushaharka shaqada.
Qayb ka mid ah tilmaamayaasha mushaharaadka Apple ayaa ah Madaxa Sare ee Jooniska Design Jony Ive, oo ku magacawday qaar ka mid ah wakiilada ugu muhiimsan ee ururka. Waxaan ku nuuxnuuxsaday waxyaabo badan oo badan oo Apple ka mid ah waxyaabaha ugu caansan sida iMac, iPod iyo iPhone.
Wakaaladaha Apple ma aysan si degdeg ah uga jawaab celin wicitaanka iyo emailka loo diray saacado shaqo oo dibadda ah.
4 Koorsooyinka Tababarka La'aanta iyo Shahaadada ee Microsoft